Izinkinga zamanzi nenhlanzeko ziyalandelwa – Msunduzi News
UMasipala uMsunduzi uhlela ukubhekana ngqo ngokushesha namapayipi amanzi nawenhlanzeko aqhumile
UMasipala uMsunduzi uthathe isinyathelo sokuxazulula izinkinga zamanzi ezindaweni ezisenyakatho ezihlale ziqhunyelwa amapayipi. UMasipala uzobhekana nezinkinga zenhlanzeko esebenzisa amanzi.
Usubeke eceleni imali elinganiselwa ezigidini ezili-R19 ukuze kukhishwe amapayipi amadala asehluphe izakhamuzi kabi ezikulezi zindawo. IKomidi Elahlulela Ukuncintisana seliqedile ngokuqashwa kwabazoletha izinsizakalo okulindeleke ukuthi baqale ukusebenza ngoNcwaba nonyaka. Lo msebenzi kulindeleke uthathe izinyanga ezili-12.
Amapayipi amakhulu azokhishwa kufakwe amanye yilawa:
Elisemigwaqweni uBelfort noPioneer kufakwe elisha elingama-995m,
Elisemgwaqweni uMedina kufakwe elisha elingama-600m,
Elisemgwaqweni uDaffodil kufakwe elisha elingama-183m.
Kufakwe elisha elingama-169m emgwaqweni u-Amritsar,
Elisemgwaqweni u-Andhra kufakwe elisha elingama-166m,
Elisemigwaqweni uDeccan noCora kufakwe elisha elingama-812m nelinye elingama-695m elizofakwa emigwaqweni uGinger noPastoral.
Ipayipi lendle elikhulu elisemgwaqweni uSarojini kuWadi 32 liyinkinga njengamanje ngenxa yokukapaka kwendle enamanzi avela eHappy Valley.
Isizathu esikhulu sokuvimbeka kokugeleza kwamanzi sibangwa ukulahlwa kwemfucuza, amabhodlela eplastiki, amanabukeni nokunye okuyimfucuza ehluka hlukene.
Kubuye kube neqwaba yesihlabathi esingena kulo mgudu wamapayipi. Lena yinkinga yomphakathi kunaleyo eyobuchwepheshe futhi kuhlangenwe noLawulo Lwendawo. Umkhankaso wokufundisa uzohlelelwa abaseHappy Valley.
Isixazululo ngezobuchwepheshe ukuze kungavimbeleki ukugeleza kuSarawan noSarojini sizoba sepayipini Elisha elingama-900m, elizimele, kufanele libe nobubanzi okungenani obungama-300mm ukubalekela ukungagelezi. Izindleko zilanganiselwa ezigidini ezi-R3,5 kubhekwa ukudwetshwa, ithenda nokutholakala komsebenzi.
AbaseWillowfontein sebethole iphampu yamanzi entsha
Izinkinga zamanzi ezikhungathe izakhamuzi zaseWillowfontein kule minyaka emine edlule sekuzoba wumlando njengoba uMasipala uMsunduzi ufake iphampu yamanzi ngemali eyizigidi ezi-R1.1.
Le phampu entsha izofakela amanzi izindawo ezinjengaKwaPhupha, KwaTomu, eSoweto, Esitobhini Esikhulu, kwaKhuzwayo, eBulwer naseManyiyisa ebezingenamanzi iminyaka emine edlule. Lezi zindawo bezithembele ezimotweni zamanzi eziyisithupha ebezifika masonto wonke, kanti bezibuye zingafiki. Ngezinye izikhathi izakhamuzi beziphoqeleka ukusebenzisa amanzi angcolile asemfuleni iZikizi.
IMeya uThemba Njilo ithe ukugqoza kwamanzi akukho eWillowfontein kuphela kepha naseSnathing njengoba benikwe iphampu ebize izigidi ezi-R3.7 ngoNhlangulana nonyaka.
UNjilo uthe ukugqoza kwamanzi kudalwe yisomiso esenze umfutho wamanzi wehle emathangeni amakhulu agcina amanzi nokwehla komthamo wamanzi edamini i-Albert Falls, kangangokuthi amanzi abesengasaphampeki.
Uthe ngenxa yalesi simo, uMasipala uphoqelekile ukusebenzisa iphampu eyodwa ngesikhathi, ngoba amaphampu abengakwazi ukusebenza womabili kanyekanye. UNjilo uvumile ukuthi kusanezindawo ezimbalwa lapho kufanele kulungiswe amapayipi avalekile namavalve aphukile ngaphambi kokuthi amanzi afinyelele kubantu.
Ube esethembisa ukusheshisa lo msebenzi, wathi inkampani eqashelwe ukufaka iphampu eSnathing yiyo ezozolungisa amavalve aphukile namapayipi avalekile. Noma nje abahlali bekushayele ihlombe lokhu kusanokukhathazeka ezindaweni ezifana nase-Ezakhiweni, ePhupha naseSoweto abasagqozelwa amanzi.
Ilunga leKomidi leWadi, uZanele Zondi, uthe bathemba ukuthi uMasipala uzosigcina isethembiso sokusheshisa lo msebenzi ezindaweni ezingakasizakali.
Previous post: IMeya iyaqhubeka isiza abanganemakhaya
Next post: Ithelekile iMsunduzi Cup